Jakoba 2 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
2 Ry rahalahiko, manam-pinoana an’i Jesosy Kristy Tompontsika sy voninahitsika+ ve ianareo, nefa mizaha tavan’olona?+ 2 Raha miditra ao amin’ny fivorianareo,+ ohatra, ny olona iray manao peratra volamena sy akanjo mirenty, ary miditra koa ny mahantra iray maloto akanjo,+ 3 dia ilay manao akanjo mirenty no tianareo kokoa,+ ka ilazanareo hoe: “Mipetraha eto amin’ny toerana tsara eto ianao.” Fa ilay mahantra kosa ilazanareo hoe: “Mijoroa eo ihany ianao”, na hoe: “Mipetraha etsy ambany etsy, eo akaikin’ny fitoeran-tongotro.” 4 Raha izany, tsy misy fanavakavahana ve eo aminareo,+ ka lasa mpitsara+ miangatra+ ianareo? 5 Henoy izao, ry rahalahy malala: Tsy ny mahantra+ eo amin’izao tontolo izao ve no nofidin’Andriamanitra hanan-karena+ amin’ny finoana, sy ho mpandova ilay fanjakana nampanantenainy an’ireo tia azy?+ 6 Ianareo anefa tsy manome voninahitra ny mahantra. Tsy ny manankarena ve no mampahory+ anareo sy mitaritarika anareo ho any amin’ny fitsarana?+ 7 Tsy manevateva+ an’ilay anarana tsara niantsoana anareo+ ve izy? 8 Tena tsara anefa ny ataonareo raha ankatoavinareo hatrany izao mpanjakan’ny lalàna*+ izao, araka ny voalaza ao amin’ny Soratra Masina hoe: “Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao.”+ 9 Raha mbola mizaha tavan’olona foana anefa ianareo+ dia manota, satria asehon’ny lalàna+ fa mpandika lalàna ianareo. 10 Na iza na iza mitandrina ny Lalàna rehetra, nefa diso amin’ny iray monja, dia manjary meloka amin’izy rehetra.+ 11 Fa ilay nilaza hoe: “Aza manitsakitsa-bady”,+ no nilaza koa hoe: “Aza mamono olona.”+ Raha tsy manitsakitsa-bady ianao nefa mamono olona, dia lasa mpandika lalàna. 12 Asehoy hatrany eo amin’izay lazainareo sy ataonareo fa hotsarain’ny lalàn’ny olona afaka ianareo.+ 13 Hotsaraina tsy misy indrafo izay olona tsy mpamindra fo.+ Fa ny famindram-po dia mandresy ny fitsarana. 14 Inona no soa azo, ry rahalahiko, raha misy milaza fa manam-pinoana,+ nefa tsy asehony amin’ny ataony izany?+ Hahavonjy azy ve izany finoana izany?+ 15 Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy ampy sakafo isan’andro,+ 16 nefa misy aminareo milaza aminy hoe: “Mirary soa e! Enga anie ka hafana sy ho voky tsara foana ianareo!”, kanefa tsy omenareo azy izay ilain’ny vatany, inona moa no soa azo avy amin’izany?+ 17 Toy izany koa ny finoana, raha tsy aseho amin’ny atao,+ dia maty. 18 Hisy anefa hilaza hoe: “Finoana fotsiny ny anao, fa ny ahy kosa finoana aseho amin’ny atao. Asehoy amiko amin’izao fotsiny ny finoanao, fa izaho kosa haneho aminao ny finoako amin’ny ataoko.”+ 19 Mino ve ianao fa misy Andriamanitra tokana?+ Tena tsara izany. Ny demonia koa anefa mba mino ka mangovitra.+ 20 Mba fantatrao moa, ry adala, fa tsy miasa ny finoana raha tsy aseho amin’ny atao? 21 Tsy nambara ho marina ve i Abrahama raintsika+ noho izay nataony, rehefa avy nanolotra an’i Isaka zanany teo ambony alitara izy?+ 22 Hitanao fa ny finoany dia niara-niasa tamin’izay nataony, ary nanjary lavorary ny finoany noho izay nataony.+ 23 Tanteraka àry ny voalaza ao amin’ny Soratra Masina hoe: “I Abrahama naneho finoana an’i Jehovah, ka neken’Andriamanitra ho isan’ny olo-marina izy.”+ Koa nantsoina hoe “naman’i Jehovah” izy.+ 24 Hitanareo àry fa hambara ho marina+ ny olona noho izay ataony,+ fa tsy noho ny finoany fotsiny.+ 25 Toy izany koa i Rahaba+ mpivaro-tena: Tsy nambara ho marina ve izy noho izay nataony rehefa avy noraisiny tsara ireo iraka, ka nalefany tany amin’ny lalan-kafa?+ 26 Eny tokoa, maty ny vatana raha tsy misy aina,*+ ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy aseho amin’ny atao.+
^ A.b.t.: “lalàn’ny mpanjaka.”